Sɛ Yewu a, Henfa na Yɛkɔ? Aso Owu Ekyir Asetsena Bi Wɔ Hɔ?
Ebɛnadze na Bible no Kyerɛkyerɛ Hɛn?
KENKAN WƆ Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Bété Cambodian Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Cuba Mmum Kasa Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French Futuna (East) Ga (Nkran Kasa) German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Isoko Italian Italy Mmum Kasa Ivory Coast Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lari Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazahua Mbunda Mende Meru Mexico Mmum Kasa Mfantse Mizo Mongolian Moore Myanmar Myanmar Mmum Kasa Nahuatl (Central) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Nepali Mmum Kasa Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi (Shahmukhi) Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tatar Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Vezo Vietnamese Vietnamese Mmum Kasa Wallisian Waray-Waray Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
Sɛ Yewu a, Henfa na Yɛkɔ?
1-3. Ebɛn nsɛm na nkorɔfo bisa fa owu ho, na ebɛn nyiano na nyamesom ahorow no dze ma?
BIBLE no bɔ hɛn anohoba dɛ, mber bi bɛba a “owu nnyi hɔ bio.” (Nyikyerɛ 21:4) Wɔ Tsir 5 no mu no, yesũaa dɛ werdam no bue hokwan no ma yenya onnyiewiei nkwa. Naaso, nyimpa da ho ara wu. (Ɔsɛnkafo 9:5) Ntsi, nsɛm a ohia paa a yebisa no, no mu kor nye dɛ, Sɛ yewu a, henfa na yɛkɔ?
2 Dɛm asɛmbisa yi no ho mbuae no ho hia, nkanka ber a hɛn dɔfo bi ewu no. Ibia yebebisa dɛ: ‘Henfa na ɔkɔ? Aso ɔrohwɛ dza yɛreyɛ? Ana obotum aboa hɛn? Ana yebohu no bio da bi?’
3 Mbuae a nyamesom ahorow dze ma wɔ dɛm nsɛmbisa yi ho no gu ahorow. Binom kyerɛkyerɛ dɛ, sɛ eyɛ nyimpa papa a, ebɔkɔ sor na sɛ eyɛ nyimpa bɔn a, wɔbɛhyew wo wɔ abɔnsamgyamu. Binom kã dɛ, sɛ iwu a, edan sunsum abɔdze na enye w’ebusuafo a woewuwu dadaw no kɛtsena. Afofor so kã dɛ, ber a ewu na woebu wo atsɛn ewie no, wɔbɛsan awo wo dɛ nyimpa fofor anaa mpo dɛ abowa.
4. Ebɛn adwen tsitsir kor na nyamesom ahorow no kyerɛkyerɛ fa owu ho?
4 Ɔda edzi dɛ nkyerɛkyerɛ a nyamesom ahorow kyerɛkyerɛ fa owu ho no gu ahorow. Naaso, hɔn mu dodow no ara kyerɛkyerɛ adwen tsitsir kor bi. Wɔkyerɛkyerɛ dɛ, sɛ nyimpa wu a, biribi hyɛ no mu a ɔnodze, onnwu da. Aso iyi yɛ nokwar?
5, 6. Sɛ yewu a, henfa na yɛkɔ?
5 Jehovah nyim tsebea a yɛkɔ mu ber a yeewu no. Ɔakã akyerɛ hɛn dɛ, sɛ nyimpa wu a, nna no nkwa aba ewiei. Owu yɛ nkwa ebirabɔ. Ntsi sɛ nyimpa wu a, ne nkãtse nye ne tsirmu nsɛm nnkɔ do nntsena ase wɔ beebi fofor. * Sɛ yewu a, yerunntum nnhu adze, nntse asɛm na yerunntum nndwen so bio.
6 Ɔhen Solomon kyerɛɛw dɛ, “ewufo dze, wonnyim biribiara.” Ewufo runntum nndɔ anaa wɔnntan nyimpa. Bio so, “edwuma, anaa nhyehyɛɛ, anaa nyimdzee, anaa nyansa nnyi adakamaa” mu. (Kenkan Ɔsɛnkafo 9:5, 6, 10.) Afei so, Bible no kã kyerɛ hɛn wɔ Ndwom 146:4 no dɛ, sɛ nyimpa wu a, “ne tsirmu nsɛm” yew.
DZA JESUS KÃA FAA OWU HO
Jehovah bɔɔ nyimpa dɛ wɔntsena ase daa wɔ asaase do
7. Ebɛn asɛm na Jesus kãa faa owu ho?
7 Ber a Jesus ne nyɛnko pa Lazarus wui no, ɔsee n’esuafo no dɛ: “Hɛn nyɛnko Lazarus ada.” Naaso, nna ɔnnyɛ dza Jesus rekyerɛ nye dɛ Lazarus regye n’ahom kɛkɛ. Jesus kyerɛɛ mu dɛ: “Lazarus ewu.” (John 11:11-14) Ntsi Jesus dze owu totoo nda ho. Ɔannkã dɛ nna Lazarus wɔ sor anaa ɔnye n’ebusuafo a woewuwu no akɛtsena. Bio so, ɔannkã dɛ nna Lazarus ruhu amandze wɔ abɔnsamgyamu anaa wɔresan awo no dɛ nyimpa fofor anaa dɛ abowa. Mbom no, nna ɔtse dɛ mbrɛ Lazarus ada heii. Kyerɛwnsɛm afofor so dze owu toto nda heii ho. Bible no kã dɛ, ber a wokum Stephen no, “ɔtɔɔ nda” wɔ owu mu. (Ndwuma 7:60) Afei so, ɔsomafo Paul kyerɛɛw dɛ, nna Christianfo “binom adeda” wɔ owu mu.​—1 Corinthfo 15:6.
8. Yesi dɛn hu dɛ Nyankopɔn ammbɔ nyimpa dɛ wonwuwu?
8 Aso Nyankopɔn bɔɔ Adam na Eve dɛ wɔntsena ase nkesi ber bi na ewiei koraa no woeewuwu? Oho! Jehovah bɔɔ hɔn dɛ wɔmfa apɔwmudzen a odzi mu ntsena ase daa wɔ enyigye mu wɔ asaase do. Ber a Jehovah bɔɔ nyimpa no, ɔdze ɔpɛ a ɔnye dɛ, wɔntsena ase daa hyɛɛ hɔn akoma mu. (Ɔsɛnkafo 3:11) Awofo mmpɛ dɛ hɔn mba bɛyaryar na woeewuwu. Dɛm pɛpɛɛpɛr so na Jehovah mmpɛ dɛ yɛbɔkɔ tsebea a ɔtse dɛm mu. Naaso, sɛ Nyankopɔn bɔɔ hɛn dɛ yɛntsena ase daa a, nna ɔnodze ebɛnadze ntsi na yewuwu?
EBƐNADZE NTSI NA YEWUWU?
9. Ebɛnadze ntsi na ahyɛdze a Jehovah dze maa Adam na Eve no nnyɛ dzen dɛ wobedzi do?
9 Jehovah kãa kyerɛɛ Adam wɔ Eden ture no mu dɛ: “Ture yi mu ndua nyinara dzi bi: na papa nye bɔn ho nyimdzee dua no dze, mma nndzi bi: na da a ibedzi bi no, ampaara dɛ ibowu.” (Genesis 2:9, 16, 17) Nna dɛm ahyɛdze a no mu da hɔ yi nnyɛ dzen dɛ wobedzi do. Nna Jehovah wɔ hokwan dɛ ɔkyerɛ Adam na Eve dza ɔyɛ papa nye dza ɔyɛ bɔn. Nna setsie a wɔbɛyɛ ama Jehovah na wɔdze bɛkyerɛ dɛ, wɔwɔ obu ma no tumdzi. Bio so, nna wɔbɛda no edzi akyerɛ no dɛ, hɔn enyi sɔ dza ɔdze ama hɔn no nyinara.
10, 11. (a) Ebɛn kwan na Satan faa do maa Adam nye Eve yɛɛ bɔn? (b) Ebɛnadze ntsi na Adam na Eve nnyi anoyi biara wɔ dza wɔyɛe no ho?
10 Awerɛhosɛm nye dɛ, Adam na Eve annyɛ setsie amma Jehovah. Satan see Eve dɛ: “Ampaara dɛ Nyankopɔn ase dɛ, Mma hom nndzi ture yi mu ndua nyinara bi?” Eve see no dɛ: “Ture yi mu ndua n’eduaba no yɛwɔ ho kwan dɛ yedzi bi; na dua a osi ture finimfin no n’eduaba no na Nyankopɔn ase dɛ, Mma hom nndzi, nkyii so mma hom mmfa hom nsa nnkã, amma hom eennwuwu.”​—Genesis 3:1-3.
11 Satan see dɛ: “Hom nnkowu ara ampa bi: osiandɛ Nyankopɔn nyim dɛ da a hom bedzi bi no, hom enyi bobue, na hom ayɛ dɛ Nyankopɔn, woehu papa nye bɔn.” (Genesis 3:4-6) Nna Satan pɛ dɛ Eve nya adwen dɛ, nankasa botum esi dza ɔyɛ papa nye dza ɔyɛ bɔn ho gyinae ama noho. Ber kor noara mu no, Satan dzii ator faa dza obefi asoɔdzen a Eve bɛyɛ no mu aba no ho. Satan kãa dɛ, Eve nnkowu ara da. Dɛm ntsi, Eve tseew eduaba no bi na odzii, na ɔdze bi maa no kun. Nna Adam na Eve nyim dɛ, Jehovah akã akyerɛ hɔn dɛ mma wonndzi eduaba no bi. Ber a wodzii no, nna ɔyɛ gyinae a woesi dɛ, wɔrennyɛ setsie mma ahyɛdze a ntseasee wɔ mu na no mu da hɔ no. Wɔnam eduaba no a wodzii no do kyerɛɛ dɛ, wonnyi obu mma hɔn sor Egya a ɔwɔ ɔdɔ no. Nna wonnyi anoyi biara wɔ dza wɔyɛe no ho!
12. Ebɛnadze ntsi na ɔyɛ awerɛhow paa dɛ Adam na Eve annyɛ setsie amma Jehovah?
12 Hwɛ mbrɛ osi yɛ awerɛhow dɛ hɛn awofo a wodzi kan no annkyerɛ obu biara amma hɔn Bɔfo no! Sɛ etsetse ɔbabanyin na ɔbabaa ma wɔbɛyɛ mpanyimfo na ekyir yi, wɔtsew wo do etũa na wɔannyɛ dza ekãa kyerɛɛ hɔn no mu biara a, ebɛtse nkã dɛn? Ana w’akoma nnkɛtsew?
Nna Adam fi huntuma mu, na ɔsanee kɔr huntuma mu
13. Ber a Jehovah kãa kyerɛɛ Adam dɛ, “huntuma mu na ebɛsan akɔ” no, nna ɔrepɛ akyerɛ dɛn?
13 Ber a Adam na Eve annyɛ setsie no, wɔhweer hokwan a nkyɛ wɔwɔ dɛ wɔbɛtsena ase daa no. Nna Jehovah akã akyerɛ Adam dɛ: “Huntuma nye wo, na huntuma mu na ebɛsan akɔ.” (Kenkan Genesis 3:19.) Dza nna iyi kyerɛ nye dɛ, Adam bɛsan akɔ huntuma mu bio. Nna tsebea a ɔbɔkɔ mu no bɛyɛ tse dɛ mbrɛ wɔmmbɔɔ no mmbaa asaase do da. (Genesis 2:7) Adam yɛɛ bɔn ekyir no, owui na ɔannkɔ do anntsena ase bio.
14. Ebɛnadze ntsi na yewuwu?
14 Sɛ Adam na Eve yɛɛ setsie maa Nyankopɔn a, nkyɛ wɔda ho ara tse ase. Naaso ber a wɔannyɛ setsie amma no no, wɔyɛɛ bɔn na ekyir yi wowuwui. Bɔn tse dɛ yarbabɔn bi a yeenya efi hɛn awofo a wodzi kan no hɔ. Wɔawo hɛn nyina dɛ ndzebɔnyɛfo, ɔno ntsi na yewuwu no. (Romefo 5:12) Naaso iyi nnyɛ Nyankopɔn no botae a ɔdze bɔɔ nyimpa. Nna Nyankopɔn mmpɛ dɛ nyimpa bowu ara da, ntsi na Bible no frɛ owu dɛ “ɔtamfo” no.​—1 Corinthfo 15:26.
NOKWAR NO MA YƐDZE HƐNHO
15. Ebɛn kwan do na nokwasɛm a ɔfa owu ho no ma yɛdze hɛnho?
15 Nokwasɛm a ɔfa owu ho no ma yɛdze hɛnho fi nsusui ahorow a ɔnntsen ho. Bible no kyerɛkyerɛ hɛn dɛ, ewufo nntse yaw nkã na wonndzi awerɛhow so. Yerunntum nnkasa nnkyerɛ hɔn, dɛmara so na worunntum nnkasa nnkyerɛ hɛn. Yerunntum mmboa ewufo, dɛmara so na ewufo runntum mmboa hɛn. Worunntum mmpira hɛn, ntsi ɔnnsɛ dɛ yesuro hɔn. Naaso, ɔsom ahorow pii kyerɛkyerɛ dɛ, ewufo da ho ara tse ase wɔ beebi na yebotum aboa hɔn dze nam sika a yebotua ama asɔfo anaa hɔn a wobu hɔn dɛ wɔyɛ akrɔnkrɔmfo ma wɔaabɔ mpaa ama hɔn. Naaso, sɛ yenyim nokwasɛm a ɔfa owu ho a, dɛm ator nkyerɛkyerɛ yi runntum ndaadaa hɛn da.
16. Ebɛn atorsɛm na ɔsom ahorow pii kyerɛkyerɛ fa tsebea a ewufo wɔ mu no ho?
16 Satan nam ator som do daadaa hɛn, na ɔpɛ dɛ yɛgye dzi dɛ ewufo da ho ara tse ase. Dɛ nhwɛdo no, ɔsom ahorow bi kyerɛkyerɛ dɛ, sɛ yewu a, biribi hyɛ hɛn mu a ɔnodze, onnwu da. Aso dɛm na ɔsom a ewɔ mu no kyerɛkyerɛ, anaa ɔkyerɛkyerɛ wo dza Bible no kã fa tsebea a ewufo wɔ mu no ho? Satan da ho ara dzi ator daadaa nkorɔfo dze twe hɔn fi Jehovah ho.
17. Ebɛnadze ntsi na abɔnsamgyamu ho nkyerɛkyerɛ no nnhyɛ Jehovah enyimnyam?
17 Dza ɔsom ahorow pii kyerɛkyerɛ fa ewufo ho no yɛ ahobowsɛm. Dɛ nhwɛdo no, ɔsom binom kyerɛkyerɛ dɛ, wɔbɛhyew ndzebɔnyɛfo wɔ abɔnsamgyamu daa. Dɛm ator nkyerɛkyerɛ yi nnhyɛ Jehovah enyimnyam. Ɔremma nkorɔfo nnhu amandze wɔ dɛm kwan no do da! (Kenkan 1 John 4:8.) Sɛ obi dze ne ba ne nsa hyɛ ogya mu dze twe n’aso a, ebɛn asɛm na ebɛkã afa dɛm nyimpa yi ho? Ebɛkã dɛ ɔyɛ owudzifo paa na w’enyi renngye ho mpo dɛ ebɛfa no nyɛnko. Dɛm pɛpɛɛpɛr na Satan pɛ dɛ yɛtse nkã wɔ Jehovah ho!
18. Ebɛnadze ntsi na ɔnnsɛ dɛ yesuro ewufo?
18 Ɔsom binom kyerɛkyerɛ dɛ, sɛ nyimpa wu a, wɔdan esunsum abɔdze. Dɛm ɔsom ahorow yi kyerɛkyerɛ dɛ, ɔsɛ dɛ yɛdze obu ma dɛm esunsum abɔdze no na yesuro hɔn, osiandɛ wobotum aba abɛyɛ hɛn anyɛnkofo a wɔwɔ tum anaadɛ atamfo a hɔn ho yɛ hu. Nyimpa pii gye dɛm ator nkyerɛkyerɛ yi dzi. Dɛm ntsi, wosuro ewufo na wɔsom hɔn mbom sen dɛ wɔbɔsom Jehovah. Kaa dɛ, ewufo nntum nnhu adze, wɔnntse nkã na wonnyim biribiara so, ntsi ɔnnsɛ dɛ yesuro hɔn. Jehovah nye hɛn Bɔfo. Ɔno nye nokwar Nyankopɔn no, dɛm ntsi ɔno nkotsee na ɔsɛ dɛ yɛsom no.​—Nyikyerɛ 4:11.
19. Ebɛn kwan do na nokwasɛm a yenyim fa ewufo ho no boa hɛn?
19 Sɛ yenyim nokwasɛm a ɔfa ewufo ho a, ɔbɛma yɛagye hɛnho efi ator nyamesom nkyerɛkyerɛ ho. Dɛm nokwasɛm yi boa hɛn ma yɛtse Jehovah n’anohoba ahorow a ɔyɛ enyigye a ɔfa hɛn asetsena nye hɛn daakye ho no ase.
20. Ebɛnadze na yebosusu ho wɔ tsir a odzi hɔ no mu?
20 Ber tsentsen bi a etwa mu no, Nyankopɔn no somfo bi a wɔfrɛ no Job bisaa asɛm yi dɛ: “Sɛ nyimpa wu a, ana ɔbɛtsena ase bio?” (Job 14:14) Aso obotum ayɛ yie dɛ nyimpa a oewu bɛsan atsena ase bio? Mbuae a Nyankopɔn dze ma hɛn wɔ Bible no mu no yɛ enyigye ankasa. Yebohu siantsir a ɔtse dɛm wɔ tsir a odzi hɔ no mu.
^ nky. 5 Nyimpa binom gye dzi dɛ, sɛ nyimpa wu a, ɔkra anaa sunsum bi hyɛ no mu a ɔnodze onnwu da. Sɛ epɛ nkyerɛkyerɛmu pii a, hwɛ Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu 17 nye 18.
ADZESUA NSƐM A WƆABƆ NO TƆW
NOKWASƐM 1: SƐ NYIMPA WU A, NNA NO NKWA ABA EWIEI
“Ewufo dze wonnyim biribiara.”​—Ɔsɛnkafo 9:5
Ndwom 146:3, 4; Ɔsɛnkafo 9:6, 10
Sɛ yewu a, yerunntum nnhu adze, nntse asɛm, na yerunntum nndwen so bio.
Jesus dze owu totoo nda ho.
NOKWASƐM 2: NNA JEHOVAH MMPƐ DƐ NYIMPA BOWU ARA DA
“Papa nye bɔn ho nyimdzee dua no dze, mma nndzi bi: na da a ibedzi bi no, ampaara dɛ ibowu.”​—Genesis 2:17
Satan dzii ator faa dza obefi setsie a Eve rennyɛ mma Nyankopɔn n’ahyɛdze mu aba no ho. Ber a Adam na Eve annyɛ setsie amma Jehovah no, wɔyɛɛ bɔn na ekyir yi wowuwui.
Adam wui ekyir no, ɔannkɔ do anntsena ase.
Bɔn tse dɛ yarbabɔn bi a yeenya efi hɛn awofo a wodzi kan no hɔ. Wɔawo hɛn nyina dɛ ndzebɔnyɛfo, ɔno ntsi na yewuwu no.
1 Corinthfo 15:26
Bible no frɛ owu dɛ ɔtamfo.
NOKWASƐM 3: NOKWASƐM A ƆFA OWU HO NO MA YƐDZE HƐNHO
‘Sɛ nyimpa wu a, ana ɔbɛtsena ase bio? Mobɔtweɔn ekodu dɛ me nsakyeree bɛba.’​—Job 14:14
Ebɛn kwan do na nokwasɛm a yenyim fa owu ho no ma yɛdze hɛnho fi nsusui ahorow a ɔnntsen ho?
Abɔnsamgyamu nkyerɛkyerɛ no nnhyɛ Jehovah enyimnyam. Ɔremma nkorɔfo nnhu amandze wɔ dɛm kwan yi do da.
Nyimpa pii suro ewufo, dɛm ntsi wɔsom hɔn mbom sen dɛ wɔbɔsom Jehovah. Jehovah nye nokwar Nyankopɔn no, dɛm ntsi ɔno nkotsee na ɔsɛ dɛ yɛsom no.
Ebɛn Botae na Nyankopɔn Wɔ ma Hɛn?
TSIR 1 Woana Nye Nyankopɔn?
TSIR 2 Bible​—Nwoma a Ofi Nyankopɔn Nkyɛn
TSIR 3 Ebɛn Botae na Nyankopɔn Wɔ ma Nyimpa?
TSIR 4 Woana Nye Jesus Christ?
TSIR 5 Werdam no​—Nyankopɔn n’Akyɛdze a Ɔsom Bo Paa
TSIR 6 Sɛ Yewu a, Henfa na Yɛkɔ?
TSIR 7 Owusoɛr bi Bɛba!
TSIR 8 Nyankopɔn n’Ahendzi no, Ɔyɛ Ebɛnadze?
TSIR 9 Ana Wiadze no n’Ewiei Abɛn?
TSIR 10 Nokwasɛm a Ɔfa Abɔfo Ho
TSIR 11 Ebɛnadze Ntsi na Amandzehu Adɔɔ Sõ Dɛm?
TSIR 12 Ibesi Dɛn Abɛyɛ Nyankopɔn Ne Nyɛnko?
TSIR 13 Obu a Yɛbɛkyerɛ Ama Nkwa
TSIR 14 W’Ebusua Botum Enya Enyigye
TSIR 15 Ɔkwan Pa a Wɔfa Do Som Nyankopɔn
TSIR 16 Si Gyinae dɛ Ebɔsom Nyankopɔn Wɔ Nokwar Mu
TSIR 17 Mpaabɔ Yɛ Hokwan Soronko
TSIR 18 Ana Minhyira Mo Nkwa Do Mma Nyankopɔn na Wonnuma Me?
TSIR 19 Takyer Jehovah Ho
Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan Ebɛnadze na Bible no Kyerɛkyerɛ Hɛn?